Celebrating King's Day In The Netherlands (mpanjaka) | Save A Train
Home > Travel Europe > Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy (mpanjaka)
(Last Nohavaozina: 04/02/2020)
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy mety ho ny tsara indrindra ao amin'ny antoko Holland. On 27 Aprily, dia mankalaza Mpanjaka Willem-Alexander ny andro nahaterahan'i amin'ny mozika, eny an-dalana antoko, parasy tsena, ary mahafinaritra entanao. Ny mpanjaka ny tenany mandeha nitety ny tany amin'ny family. Ny alina talohan'ny andro Mpanjaka, Mpanjaka Night ankalazaina miaraka amin'ny mozika mampiseho ao La Haye sy ny tanàna hafa sy ny firenena lehibe indrindra parasy ('Maimaim-poana') tsena in Utrecht. Vonona mba hahitana izay rehetra momba izany? eto no mahatonga tokony ho Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy.
*Fanamarihana! Mpanjaka andro iray ihany ny volana lasa. Izao no fotoana au livre ny trano fandraisam-bahiny Amsterdam ho an'ny Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy. Mpitsidika manerana Holandy, ary miha-boky avy any ivelany tany am-boalohany mba hahazoana antoka efi-trano misy.
INONA NY IN A NAME?
am-boalohany, Princess Day dia nankalazaina tao Holland ao amin'ny Wilhelmina ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i (31 Aogositra), fony izy mbola andriambavy. Ny antoko maro Nanana ampahany aminy, anisan'izany ny; maro ny ankizy ny kilalao sy ny voaravaka arabe. Rehefa lasa ny vaovao Wilhelmina mpanjakavavy, rehefa maty ny rainy, dia niova ny Queen ny Day.
Juliana, ny mpanjakavavy sy Wilhelmina manaraka ny zanakavavin'i, malaza Queen ny andro 30 Aprily tamin'ny matso amin'ny Soestdijk. Beatrix Nankalaza Queen koa ny andro 30 Aprily (ny ny tsingerintaona nahaterahany dia tamin'ny Janoary) fa mifanohitra amin'ny reniny, dia naka azy sy ny fianakaviana manontolo Nandeha nanerana ny firenena mba hitsidika maro kaominina. Mpanjaka Willem Alexander dia nanaraka fomban-drazana ity. Teraka tamin'ny 27 Aprily ary izany dia tonga ny andro ofisialy in 2014 noho ny Fankalazana ny Fetin'ny Mpanjaka any Holandy.
ORANGE Ny zava-drehetra eo amin'ny Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy!
Ny fianakavian'ny mpanjaka Holandey mitondra ny anarana: House ny Orange. Izany dia midika ara-bakiteny ny loko voasary. Vokatr'izany, efa lasa Holland ny loko-pirenena. Ao amin'ny andro Mpanjaka, ho hitanao rehetra manao volomboasary amin'ny fomba na endrika. Noho izany, mahazo fiantsenana!
Raha Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy, olona nahazo mivarotra zavatra teny an-dalana tsy mila fahazoan-dalana. parasy ('Maimaim-poana') tsena dia natao amin'ny zaridainam-panjakana sy eny an-dalambe, amin'ny olona maro tsy ilaina manolotra ny fananany, mozika, na fialam-boly hafa amidy. Eritrereto ho toy ny garazy fivarotana, fa ny maro kokoa! in Utrecht, ny parasy tsena dia manomboka ny alina talohan'ny andro Mpanjaka. Mahazo mandeha àry ny kiraro.
AOKA NY bera ho Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy!
rehetra fanasana mitaky ny toast! Right? Ao amin'ny andro Mpanjaka, ny olona manao bera ho mpanjaka amin'ny Orange Mangidy, volomboasary misy mifaritra liqueur. Mazava ho azy, mitandrina izany amin'ny fomban-drazana ny fanaovana volomboasary, koa! Ny zava-pisotro noforonina tao 1620 mba hankalaza Prince Fredrick Henry fandresen'i. voalohany, dia tsy fantatra tsara fa rehefa William ny Orange lasa ny mpanjaka voalohany, dia namokatra indray. Nanomboka tamin'izay, Orange Mangidy no mifandray akaiky amin'ny fianakavian'ny mpanjaka Holandey.
Inona no nisotro? LABIERA, MAZAVA HO AZY!
Holland tia ny booze ary rehefa afaka am-polony taona ny mahay-barotra amin'ny alalan'ny Heineken, Anarana iombonana ara-barotra ny avonavona, ny olon-drehetra dia mpijery eo amin'ny foamy mamy mamimbony ny andriamanitra nandritra ny andro Mpanjaka.
No labiera fitaratra no sisa feno, tsy misy saina no sisa mazava. Raha toa ka misy ve ny andro mba ho tena aoka ny volo teo, izany ho azy! Ary tsy ny andro fotsiny King, ny Mpanjaka ny alina talohan'ny dia ny antsasaky ny mahafinaritra. Izany matetika ho be atao ho Mpanjaka ny andro Miiba ny ankizy sy ny fianakaviana. Midika izany fa na dia tsy inhibition ny ranon ny labiera, ary slur ny teny.
Liege ny Maastricht Lamasinina
Charleroi ny Maastricht Lamasinina
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy dia tsy hoe fotsiny ho an'ny olon-dehibe. Misy be dia be ny asa mitranga manerana ny tanàna ny tanora am-po sy ny tanora, anisan'izany face-hoso-doko, lalao sy ny fanatanjahan-tena zava-mitranga. Jereo ny Mpanjaka fianakaviana ny andro mahafinaritra pejy Raha mila fanazavana fanampiny.
Bruxelles ho The Hague Lamasinina
Antwerp ho The Hague Lamasinina
Paris ho any The Hague Lamasinina
Mpanjaka Night & Antoko Day
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy dia andro tsy fiasana nefa azo antoka fa tsy ho andro fitsaharana. ny holandey, ireo mpiasa vahiny sy ny mpizaha tany samy mirohotra ho any Amsterdam ho andro fankalazana. Ny fomba nentim-paharazana mahafinaritra dia manomboka eo amin'ny ankatoky ny andro lehibe (Mpanjaka Night) ny fetibe rivo-piainana mitohy manerana ny tanàna ao amin'ny mpanjaka ny andro. DJs milalao antoko eo amin'ny kianjam-bahoaka, mamirapiratra voaravaka sambo mameno lakandrano sy ny velona mozika spills teo arabe avy Cafe patios. Read more about Mpanjaka ny zava-nitranga Day.
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy eny Amin'ny Lakandranon'i
Tsy mbola nisy gridlock fifamoivoizana be mahafinaritra! Ao amin'ny andro Mpanjaka, an'arivony mamirapiratra voaravaka entana ny sambo tery Amsterdam lakandrano. Hot Soso-kevitra. Boky ny sambo mialoha!
Handray anjara amin'ny fanao isan-taona ny Andron'ny Mpanjaka any Amsterdam tamin'ny iray ora mahagaga 1.5 lakandrano Cruise amin'ny alalan'ny afovoan-tanàna. Talanjona ny mamirapiratra voaravaka sambo sy hankafy zava-pisotro onboard manam-petra.
About izany asa:
– Duration 90 minitra
– Skip ny tsipika
– Pirinty na finday voucher nanaiky
– Instant ny fandraisana ho mpikambana
– Easy fanafoanana
ny holandey, ireo mpiasa vahiny sy ny mpizaha tany samy mirohotra ho any Amsterdam ho an'ny Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy. Ho azo antoka tsy malahelo avy amin'ny fahafinaretana, ary mampiasa boky ankehitriny Save A Train Tsy misy saram miafina, ary mora tahaka ny 1, 2, 3!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrating-kings-day-netherlands/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#KingsDay #mpanjaka #traveleurope europetravel Train Travel travelamsterdam travelnetherlands traveltips